Waxqabadka xukuumada Puntland ee M/weyne Faroole 100-kii maalmood ee ugu horeeyey. – Radio Daljir
Waxqabadka xukuumada Puntland ee M/weyne Faroole 100-kii maalmood ee ugu horeeyey.
Maadaama aan ahay Madaxweynaha Puntland, waxaa xil iga saaran yahay in aan dadka Puntland usoo bandhigo hawl qabadkii maamulkayga. Sababtaas weeye tan aan usoo bandhigayo warbixintan ku saabsan 100kii maalmood ee ugu horeysey ee Dawladaydu ay xilka haysay ? taas oo ah markii ugu horeysay taariikhda dawladda Puntland oo la sameeyo arrin noocan oo kale ah.
Warbixintu waxay faahfaahinaysaa tallaabooyinkii ugu horeyey ee aanu qaadnay si aan Dawlad Goboleedka uga badbaadino burbur ay qarka u saarnayd, isla markaasna waxaan soo bandhigaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee aan ka qabanay qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay: Amniga, Maaliyadda, Nidaamka Sharciga iyo Xiriirka Caalamiga ah.
Waxaan kalsooni kuqabnaa in dadweynaha iyo qaybaha danaynaya in ay akhbaartani u muujin doonto sida ay dawladda uga go?an tahay horumarinta iyo nidaamka dawlad wanaagga ee Puntland.
Il – puntlandgovt.com http://daljir.com/